Hab cusub oo loo wajahayo kaalmada la siiyo Soomaaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hab cusub oo loo wajahayo kaalmada la siiyo Soomaaliya
La daabacay fredag 28 juni 2013 kl 11.40
Taageerada dhaqaale ee Soomaaliya oo dalkani laba jibbaari doono
(0:42 min) (0:42 min)
Wasiiradda Kaalmada Dibedda Gunilla Carlsson
Rajo weyn ayaa laga qabaa in Soomaaliya gaarto horumar kadib markii ay sanooyin badan ku soo jirtey dagaal-sukeeye. Haddana waxaa Soomaaliya u soo iftiimaya fursado cusub ay ku dhisto nabad waarta iyo dib-u-dhis wax ku ool ah.
Haddaba iyadoo dowladda Iswiidhen taas ambaqaadeysa ayey maanta go’aan ku gaartey in hab cusub loo wajaho kaalmada ay Iswiidhen siineyso Soomaaliya shanta sano ee soo socota. Habkaan cusub wuxuu wajahayaa sidii Soomaaliya looga kaalmeyn lahaa dib-u-dhis waqti dheer socon doona iyo sidii diiradda loo saari lahaa hagaajinta arrimaha ay ka mid yihiin ammaanka ama adeegga bulshada, dimoqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha, iyo caafimaadka iyo sinnaanta. Kaalmada hadda la siiyo ayaa la labajibbaaraya oo la gaarsiinayaa ilaa 300 malyan oo karoon sannadkii inta u dhexeeya 2013 iyo 2017.
- Hawlo ballaaran ayaa Soomaaliya horyaal, xaaladda ammaankuna weli waa dhutineysaa. Hase ahaate mar haddii nabad-dhisiddii bilaabatay, waxaa nagu waajib ah ka kaalmeyno sidii loo gaari lahaa xasillooni iyo dimoqraadiyad waarta. Sidaas awgeed ayaan culeyska u saareynnaa hawlaha lagu kaalmeynayo dhallinyarada iyo haweenka sidii shirkado ganacsi u furan lahaayeen, ayey tiri wasiiradda kaalmada dibedda Gunilla Carlsson.
- Hawlahaasna waxaa kaalin weyn ka qaadan kara soomaalida Iswiidhen ku nool, waayo soomaalida Iswiidhen ku nooli waxay leeyihiin aqoon qiimo badan. Hadafkayaga cusub ayeyna ka mid tahay in aan soomaalida qurba-joogta ah ka kaalmeynno fursadaha ay uga qaybqaadan karaa dib-u-dhiska Soomaaliya, ayey hadalkeedii ku soo gunaanadday wasiiraddu.